Akụkọ - November 11, 2018 stream flo company of Canada
Osisi Krismas na Wellheads
Metal Abụọ-Ibe sere n'elu Ball valvụ
BALL RELỌ OPERATOR Ọnụ ụzọ ámá valvụ
SALO IHE Nyochaa valvụ
Mpụga uwe onu Chock valvụ
Na-agbasawanye Site na Valve Gate Valve Maka API6A Standard
Hydraulic Arụ Ọrụ Ọnụ Gatezọ Gatemá Valve
Rewghasa Type apịtị valvụ N'ihi API6A Standard
Akwụkwọ mpịakọta akwụkwọ ntuziaka maka ọkọlọtọ API6A
Illinggba mgba apịtị Manifold
N'elu Ule Manifold
OZI & OZI
Nọvemba 11, 2018 stream flo company nke Canada
Jiri obi ụtọ na-anabata Canada Stream Flo Company na-aga eleta cepai
Na 14: 00pm na November 11, 2018, Curtis altmiks, onye nduzi zuru ụwa ọnụ nke Stream Flo Company na Canada, na Trish Nadeau, onye nyocha nyocha ọkọnọ, tinyere Cai Hui, onye isi njikwa nke ụlọ ọrụ Shanghai, gara cepai maka nyocha. Maazị Liang Guihua, onye isi oche nke cepai, ji obi ụtọ soro ya.
E hiwere Stlọ Ọrụ Stream na 1969, bụ onye kacha ekesa ngwa ngwa mmanụ na Canada, a na-ebupụtakwa ngwaahịa ya karịa mba 300 gburugburu ụwa. Site na mmụba nke ahịa igwe na afọ a, azụmaahịa zuru ụwa ọnụ nke Stream Flo Company na-agbasa ngwa ngwa, n'ihi mkpa mmepe, ha chọrọ ngwa ngwa ịchọkwu valvụ na ndị na-eweta ngwa ngwa na China.
Ndị isi ụlọ ọrụ CEAPI so na ndị isi nke Stream Flo Company nyochara usoro nrụpụta na mmepụta nke ngwaahịa CEPAI site na akụrụngwa, igwe na-arụ ọrụ ike, ọgwụgwọ ọkụ, mmecha, nzukọ, nyocha ụlọ ọrụ na usoro nrụpụta dị iche iche. N'ime oge nyocha ahụ niile, Trish Nadeau lebara anya n'ụzọ zuru ezu banyere ọgwụgwọ ngwaahịa CEPAI na usoro nrụpụta, dị ka njikwa njikwa nchọpụta na nchebe ọdịdị ngwaahịa yana ihe ndị ọzọ, na nsonaazụ ndị ahụ nwere afọ ojuju.
Usoro nyocha niile dị mma ma na-enye afọ ojuju. Flolọ ọrụ Stream Flo kwenyere na ikike nrụpụta CEPAI na ikike ịrụ ọrụ sistemu arụmọrụ. Curtis altmiks kwuru na nzukọ ahụ na ọ dị njikere ịmalite mmekọrịta enyi na nkwado na CEPAI. Onye isi oche Mr.Liang nwekwara ekele maka ndị otu Stream Flo maka iwepụta oge n'ọrụ ha siri ike ịga leta Cepai. O kwukwara na CEPAI ga-etinyekwu mbọ na ogo ngwaahịa yana oge nnyefe iji mezuo ihe ụlọ ọrụ Stream Flo chọrọ.